Maamulada Gobolada Dhexe oo Qiyaano ku Tilmaamay Heshiiskii Garoowe - Wargeyska Faafiye
Maamulada Gobolada Dhexe oo Qiyaano ku Tilmaamay Heshiiskii Garoowe
Maamulada ka jira Gobolada dhexe ee Dalka Soomaaliya ee kala ah Galmudug,Ximan iyo Xeeb iyo gobolka Hiiraan ayaa maanta si wada jir ah uga horyimid Heshiiskii Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Puntland ay ku Saxiixdeen Magaalada Garoowe ee Gobolka Nugaal.
Warsaxaafadeed maanta ay soo saareen ayey ku sheegeen Maamulada Gobolada dhexe in Heshiiskii Garoowe ay wada Gaareen Labo Dowladood oo siman islamarkaana aysan jirin Dowladd dhexe.
Waxaa ay sheegeen in Dowladda Soomaaliya ay ku xad gudubtay Dastuurka Dalka,sida Qodobka 111-E,Qodobka 3-aad Farqadiisa 3-aad,Cutubka Lixaad Qodobkiisa 55-aad,kuwaas oo muujinaya in Dastuurka Soomaaliya lagu xad gudbay.
Madaxda Dalka Soomaaliya ayey ugu baaqeen in ay Dib u eegaan Heshiiska Shirkaas,gaar ahaan Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud in uu dib ugu laabto.
Afhayeen u hadlay Maamulada ayaa baaq u diaray Wasaarada Arrimaha Gudaha Xukumadda Soomaaliya.
Sidoo kale Cabdi Xasan Cawaale ayaa sheegay in hadii aan la Ilaalin Dastuurka KMG ah ee Dalka uusan Nidaam jirin.
Shalay ayaa Dowladda Soomaaliya iyo Puntland waxaa ay Heshiis ku saxiixdeen Magaalada Garoowe ee Gobolka Nugaal.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsXilibaanno Baarlamaanka Soomaaliya Ka Tirsan Oo Kulan xasaasi ah ku Yeeshay Muqdisho.Dakhliga xukuumadda Soomaaliya oo sare u kacay.Wariye Kale oo lagu dilay Muqdisho.Askari Kenyan ah oo loo xiray dilka 6 qof oo somali ah .Shirka Turkiga ka furmay: Sawiro